Tababarka macalinka Ghostwriter I Waxaan ka caawinaa waraaqaha imtixaanka
Qorayaashayada ruug-caddaaga ahi waxay leeyihiin aqoonta loo baahan yahay ee dhinaca baridda
Koorsada tababarka macallimiintu way ka duwan tahay aasaas ahaan koorsooyinka kale. Sababtoo ah bilowga waxbarashadaada, waxaa jira go'aaminta nooca iskuulka aad jeclaan lahayd inaad hadhow wax ku dhigto. Waxyaabaha koorsada sidoo kale ku kala duwan yihiin. Go'aanka waa in loo sameeyaa mid ka mid ah saddexda ikhtiyaar:
Jimicsiga iyo Realschule
Dugsi gaar ah / iskuul naafada ah
Markaad go'aansato mid ka mid ah 3-da ikhtiyaar, go'aanka soo socda waa in la gaaraa oo ku saabsan maadooyinka. Laba ama saddex maaddo ayaa la isku dari karaa midba midka kale. Mar labaad, waa in la ogaadaa in isku-darka oo dhan aysan suurtagal ahayn. Maado kale waa qasab: tababarka macallinka waxbarashada. Tan macnaheedu waxa weeye in koorsada tababarka macallimiintu sida caadiga ah ay ku jiraan 3 illaa 4 maaddo.
Shahaadada ka dib 9 ilaa 10 semestarka badanaa waa Bachelor of Education. Imtixaankii hore ee caanka ahaa ee gobolka ayaa lagu qaadan karaa oo keliya jaamacado kooban.
Koorsada tababarka macallinku waxay qaadataa waqti dheer. Waxa kale oo jira muddadii lagu tababaranayay sharciga hal ilaa laba sano. Heer sare oo xirfado bulsheed ayaa looga baahan yahay si loogu guuleysto koorsada ka dibna si guul leh looga shaqeeyo shaqada. Waa inaad kuhadashaa oo aad wax ku barataa arday badan hortooda.
Waraaqaha muddada iyo waraaqaha ereyga waa in lagu qoraa maadooyinka oo dhan. Ama imtixaanka gobolka ama shahaadada bachelorka ayaa sameysa gabagabada. Laakiin xitaa tan waa inaad qortaa warqad cilmiyeed-cilmiyeed. Waxaas oo dhami waxay ka dhigan yihiin culeys badan iyo waqti yar.
Tani waa qorshe dalbasho leh oo adeegsan kara xoogaa caawimaad ah. Waxaan kuu qori karnaa waraaqaha teeramka, teesaraha bachelor-ka iyo cabirka imtixaanka gobolka. Waxaan leenahay qorayaasha saxda ah ee shaqadaada. Kaliya nala qaado Kontakt oo na sii hawshaada shaqada. Sidoo kale waa lagusoo dhaweynayaa inaad hada isticmaasho dib u xusuusasho codso oo laguu soo waco waqtiga adiga kugu habboon.
Qorayaasheennu waxay leeyihiin waayo-aragnimo sannado badan ah oo ku saabsan aaggooda cilmi-baarista waxayna leeyihiin shahaado maadadooda ah. Kama baran kartid aqoontaan dhowr toddobaad inta lagu guda jiro waxbarashadaada. Haddii aad rabto inaad dhammaystirto shahaadadaada, waa inaad aad ugu fiicantahay maadooyinka soo socda ama hal ama laba maaddo:
Waxbarasho 1 iyo barbaarin 2
Si aad ugu diyaar garowdo imtixaannada adag ee waxbarashadaada, waa inaad aqbashaa caawimaad. Xitaa ardayda dhigata koorsooyinka kale sida ganacsiga Xogta, Qareenada oder Psychologen ka faa'iideyso adeegeena kaas oo aan ku faraxsanahay inaan shaqada kuu abuuro. Koorsooyinka kale ee barashada, weli waa caadi in la diyaariyo arrimo. Kuwaas waxaa ka mid ah waraaqaha ereyga, teesarada, teesarrada bachelor-ka iyo theses the master Waxaan sidoo kale kaa caawin karnaa imtixaanada koowaad iyo labaad ee gobolka. Waan ku faraxsanahay inaan shaqada kuu soo qoro. Ereyga warqad, shahaadada bachelor-ka, qoraalka ma ahan inuu dhibaato weyn kugu ahaado adiga caawimaaddeenna. Haddii aad ku guuleysatay koorsadaada shahaadada koowaad, tusaale ahaan, waxaad wax ku bari kartaa dugsiyada sare iyo dugsiyada sare ee kale. Sidoo kale waad ku sii wadan kartaa cilmi baarista kursiga ama borofisar. Waxaad sidoo kale aadi kartaa ganacsi si aad xirfad uga sameysato halkaas.
Markaad tahay qalin jabiyaha tababarka macallimiinta, shaqo-bixiyeyaal badan oo macquul ah ayaa kaa fiirsanaya. Qeybaha caadiga ah ee shaqada ee shahaadada barashada waa maalmahan
dugsiga hoose / dhexe
Jaamacadda Cilmiga Sayniska
Dugsiga waxbarashada gaarka ah
Si aad adigu arday ahaan u tababarto macallin ahaan inaad u gaarto hadafkan, waxay kaa caawinaysaa inaad xoogga saarto imtixaannada adag ee waxbarashadaada. Shaqada tacliimeed, waa inaad u isticmaashaa wakaaladeena cirfiidka qoraaga. Inaad qorto shaqadaada ayaa adiga wax kuu tareysa. Waxaad heli doontaa buundo wanaagsan. Shaqada gurigaaga haloo qoro adigana sidoo kale Qoraal. Qoraa aqoonyahan cirfiid ayaa kaa caawin doona. Barashadaadu waxay ka faa'iideysan doontaa adeegsiga adeegyadeena. Qorayaashayagu waxay qoraan shaqadaada. Aad bay muhiim u tahay in si joogto ah looga shaqeeyo daraasad cilmiyeed. Qorayaashayadu waxay daryeelaan tayada shaqadaada. Shaqada tacliimeed, waa lagugu soo dhaweynayaa inaad dib noogu soo dhacdo.
Qoraalka ghost ee barashada
Qoraal-gacmeedku wuxuu kaa caawinayaa waxbarashadaada. Amarka Shaqadaada hada!
Barida booska ee daraasadaha Jarmalka
Barashada Jarmalka waa goob aad u ballaaran. Taas waxaad ku baranaysaa waxbarashadaada cilmiga luqadaha, Sayniska waxbarashada, Daraasadihii Dhexe iyo Barashada suugaanta ogow. Halkaas ayuu imtixaanaad ku qaadaa inta badanna hortiisa wuxuu ku leeyahay aag aad u ballaaran oo wax lagu barto. Badanaa waxaa jira dhowr fayl oo ay tahay in lagu barto qalbiga si ay ugu gudbaan imtixaanka. Waxaan ku faraxsanahay inaan idiin qabanno shaqada tacliimeed.
Barashada xisaabta si aad u noqotid macallin sidoo kale waa caqabad weyn. In kasta oo ay adag tahay in wax isbeddel ah lagu sameeyo manhajka goor dambe, haddana ma aha wax aad u fudud in la helo shahaado maadadan ku saabsan. Loo baahan yahay Caawinaad farxad ayaan ku siin karnaa.
Aagga wax lagu baro shirkadaha ganacsiga
Markaad ka qalinjabisay tababarka macallinka, dabcan sidoo kale waa suurtogal inaad adigu u gasho ganacsi. Waxaad fursad u leedahay inaad ku qaadatid koorsooyinka tababarka shirkadaha isla markaana aad si muuqata ugu muujiso asxaabtaada hortooda. Dabcan sidoo kale waad guuleysan kartaa oo xirfad ayaad ku yeelan kartaa tan. Dariiqa xirfadeed ee dugsiga ee macalin ahaan ilaa rakhta / agaasimaha xarunta dugsiga dabcan sidoo kale waa kuu furan yahay. Dabcan, waxaa jira kala duwanaansho ballaaran oo xagga aragtida goobta shaqada ah. Dabcan, waxaad haysataa fursadaha ugu fiican ee isku dhafan maadooyinka sayniska dabiiciga ah (xisaabta, fiisikiska, kimistariga, elektaroniga). Si kastaba ha noqotee, illaa iyo inta xirfadda macallinnimo guud ahaan loo tixgelinayo inay tahay caddayn mustaqbalka hadda si dhib yar looma qiyaasi karo.
Hubinta tayada ee barashada